विभिन्न कार्यक्रमसहित पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवस सम्पन्न
प्रस, पर्सा, १६ चैत/ नेपाल सञ्चारकर्मीहरूको छाता संङगठन नेपाल पत्रकारको ५६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज पत्रकार महासङ्घ पर्सा शाखाले प्रभात र्‍याली कार्यक्रम सम्पन्न गर्‍यो। घण्टाघर चोकबाट सुरु भएको प्रभातफेरी नगरको विभिन्न भाग परिक्रममा गरी पुन: घण्टाघरमैं आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो। कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय पदाधिकारी, शाखाका पूर्व सभापति एवं वर्तमान पदाधिकारी, विभिन्न सञ्चार माध्यमका पदाधिकारी र स्थानीय सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो। सभालाई महासङ्घ पर्सा शाखाका सभापति अशोक तिवारीले सम्बोधन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, स्थायी शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणका लागि सञ्चारकर्मीहरूले अझै दबाबकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कलैया/ नेपाल पत्रकार महासङ्घको ५६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधवार कलैयामा महासङ्घ बाराको अगुवाइमा शान्ति सहमति र संविधानको पक्षमा पत्रकारहरूले प्रभातफेरी गरेका छन्। महासङ्घ बाराका कार्यवाहक अध्यक्ष राकेश पाण्डेयको नेतृत्वमा महासङ्घ बाराको भवन अगाडिबाट निस्केको र्‍यालीले कलैया बजार परिक्रमा गरेको छ।
अर्थमन्त्री अधिकारीविरुद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलित
प्रस, जीतपुर, १६ चैत/ कानुनी राज्यमा प्रचलित ऐन नियमविपरीत काम गराउने सत्ताधारीको कामविरुद्ध कर्मचारी अधिकृतहरूले विरोध जारी गरेका छन्। अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको काम कारबाईविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारीले आज विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आज पेन डाउनगरी विरोध प्रदर्शन गरेको समाचार छ। प्रचलित ऐन, नियमविपरीत मुलुकको अर्थ व्यवस्था धराशायी गर्ने मन्त्रीविरुद्ध अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिनु दु:खको विषय भएको समाचारमा जनाइएको छ। अर्थ व्यवस्थाले मुलुकलाई उन्नति पथमा लम्काउने निश्चित छ तर अर्थमन्त्रीकै गैरकानुनी कामले मुलुक प्रभावित भएको् स्थानीय अर्थविद्हरू बताउँछन्।
एजेन्सी, १६ चैत/ भारतले आज विश्वकप क्रिकेट २०११ को दोस्रो सेमिफाइनलमा सचिनको ८५ रनको महत्त्वपूर्ण पारी र बलरहरूको सटिक बलिङ आक्रमणको दममा आफ्नो चिरप्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानलाई २९ रनले पराजित गरी विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानविरुद्ध अविजित यात्रालाई जारी राखेको छ। टस जिती पहिले ब्याटिङ रोजेको भारतले वीरेन्द्र सहवागको ३८ रनको विस्फोट पारी, सचिनको ८५ रनको ठोस पारी, सुरेश रैनाको अविजित ३६ रन र गौतम गम्भीरको २७ रनको मदतले ५० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा २६० रन बनाएको थियो। २६१ रनको लक्ष्य पाएको पाकिस्तानले भारतको सटिक बलिङ आक्रमण र चुस्त फिल्डिङअगाडि ५० ओभरमा सबै विकेट गुमाइ २३१ रन मात्र बनाउन सक्यो। भारतको तर्फबाट हरभजन सिंह, मुनाफ पटेल, युवराज सिंह, आशीष नेहरा र जहिर खान सबैले २/२ विकेट लिएका थिए। आजको खेलको म्यान अफ दी म्याच सचिन तेन्दुलकर भए। फाइनल खेल यही शनिवार मुम्बईमा भारत र श्रीलङकाबीच हुनेछ।
अब केही हुन्छ कि
आत्माराम भट्टराई अचेल प्राय: के देखिन–सुनिन थालेको छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयन नभएको यति भयो, उति भयो। चुनाव हुन सकेन। राजनीतिक हस्तक्षेप भयो। चुनावमा बढी तामझाम गरियो। अभिभावकलाई राजनीतिक खेमामा विभक्त गरियो। विभिन्न स्वार्थका लागि विव्यसमा हानथाप भयो। विद्यालयमा आउने बजेटका लागि, पिसिएफ र राहतकोटामा आफ्ना छोरी–बुहारी भर्ती गर्न, बालविकास केन्द्रमा आफ्ना छोरी–बुहारी भर्ति गर्नकै लागि। जसका कारण विद्यालयको निरीक्षण, हेरचाह र अनुगमन हुन सकेन। जिम्मेवारी निभाउनुपर्नेले जिम्मेवारी वहन गरेन। हाँसको बथानमा बकुल्लाको बास हुन थाल्यो। जसका छोराछोरी विद्यालयमा पढ्छन् उनको विद्यालय व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच हुन सकेन। राजनीतिक आस्थाका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको छनोट भयो। जसले गर्दा विद्यालय दलगत राजनीतिको थलो बन्यो। शिक्षाको गुणस्तर खस्किन थाल्यो। यी अधिकांश समस्या विव्यस छनोटमा लचिलोपनाका कारण उब्जिएका हुन्। यसैबीच हालै शिक्षा नियमावली २०५९ को छैंठौं संशोधन गरिएको छ। सो संशोधनले विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि केही फड्को मार्न सफल हुने सङकेत देखाएको छ। विव्
शिक्षक र दुव्र्यसन तथा विद्यार्थीमा प्रभाव
-संजय साह "मित्र" संसारका पेशा र कर्महरूमध्ये शिक्षण ज्यादै पवित्र कर्म हो। जतिसुकै पढेलेखेको भए पनि, आफू अन्य जुनसुकै पेशामा लागेको भएपनि वा जतिसुकै आम्दाजी गर्ने भएपनि, शिक्षक बन्नु पहिले र शिक्षक बनिसके पछि निकै फरक जिम्मेवारी बोध हुन्छ। एउटा बेपारीले आफूले बेच्ने सामानमा मिसावट गर्छ, म्याद गुज्रेको सामान बेच्छ, तौलने–जोख्ने कार्यमा कमीबेसी गर्छ, भाउमा वृद्धि गर्छ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ अर्थात् चारैतिरबाट आम्दाजी गर्न मात्र खोज्छ। बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने सोच राख्ने व्यापारीभन्दा शिक्षकको कार्य बढीभन्दा बढी शुद्धतातिर हुन्छ। धेरैभन्दा धेरै लेखकका पुस्तकहरू पढेर नित्य–नवीन ज्ञान दिलाउने सत्कार्यमा मिसावटको कल्पना गर्ने शिक्षक विद्यार्थीबाट पलायन हँुदै जान्छ। कतिपय शिक्षकमा पनि दुव्र्यसन पाइन्छ। यस्ता दुव्यसनी शिक्षकहरूको आदर्श वाक्य हुन्छ ‘म जे भन्छु त्यो गर र म जे गर्छु त्यो नगर’। वास्तवमा यस्तो भन्नु प्रयोगमा विश्वास नगर र अन्धविश्वासको पछि लाग वा व्यवहारबाट केही पनि सिख्न सकिंदैन, कसैले भनेका कुरकहरू नै सिकाइको ठूलो माध्यम हो भनी गलत शिक्षा विद्यार्थीला
हाम्रो सोचको दिशा
नेपालमा इमानदार व्यक्ति अब इतिहासमा मात्र पाइने छ, भएका केही इमानदारहरुलाई राजनीतिबाजहरुले धपाउने प्रक्रिया थालेका छन्। इमानदार व्यक्ति यदि क्रियाशील ठाउँमा छ भने उसले धपिने क्रियालाई छिटै भोग्नुपर्छ। अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग त्यही भएको छ। व्यक्तिको रुपमा रामेश्वर खनाललाई यस प्रक्रियाबाट दु:ख वा पीडाभन्दा खुशीकै अनुभूति भएको भान हुन्छ, किनकि उनले राजीनामा दिएलगत्तै फेसबूकमा स्वतन्त्रता निकै मूल्यवान् हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन्। इमानदारहरुको ठूलो निधि भनेकै आफ्नो ‘स्व’ जोगाउनु हो। तर यस प्रक्रियाबाट देशलाई कति हुनेछ त्यसको लेखा यहाँ शायद नै गरिएला। यस देशलाई, यहाँको जनताको सोच कुन दिशामा अग्रसर गराउने भन्ने निर्देशन राजनेताहरुले दिने हो। यो अलग कुरा हो नेपालमा राजनेता छैनन्, राजनीतिबाजहरु मात्र छन् भन्ने कुरा स्थापित सत्य हो। तर पनि देशले एउटा न दिशा त नै रोज्छ नै, किनभने गतिशीलता यस संसारको नियम हो, त्यो गतिशीलता उज्ज्वल दिशा उन्मुख होस् अथवा अन्धदिशातिर। हिजोआज उद्योग क्षेत्रमा हडताल चलिरहेको छ। यसले गर्दा नागरिकलाई केही होलो भएको छ। सोमवारका दिन विद्युत् प्राधिकरणले दिनभ
उद्योगीहरूले चाबी बुझाए, मधेसी फोरम वार्ताका लागि राजधानीमा
प्रस, पर्सा, १५ चैत/ वीरगंज–पथलैया करिडोरका उद्योगहरू आज तेस्रो दिन पनि बन्द रहे। माओवादी सम्बद्ध दुई ट्रेड युनियन र मधेसी कारखाना फोरमको आह्वानमा गत आइतवारदेखि बन्द गरिएको उद्योगहरू आज पनि खुलेनन्। करिब एक हजारको सङ्ख्यामा रहेका उद्योगहरू आइतवारदेखि बन्द भएको कारण दैनिक ५० करोडभन्दा बढी घाटा भइरहेको छ। तीन ट्रेड युनियन र उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच भएको सहमति नमानेका ए. माओवादी सम्बद्ध दुई ट्ेरेड युनियन र मधेसी कारखाना फोरमको आह्वानमा आज पनि बिहानैदेखि मजदुरहरूले कोरिडर क्षेत्रमा प्रदर्शन तथा नाराबाजी गरेका थिए। बारा–सिमरामा बिहान निकालिएको जुलुसपछि आन्दोलनरत अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्ेरेड युनियनका अध्यक्ष बद्री बजगाईंले मजदुरको माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन यथावत् रहने बताए। उनले माग पूरा नहुन्जेल कुनै शर्तमा आन्दोलन स्थगित नहुने प्रतिबद्धता जनाए। उनले मजदुरको हकमा आन्दोलन गरेको तर आन्दोलनलाई विभिन्न किसिमले बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै मजदुर आन्दोलनलाई भड्काउने दुष्प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका थिए। आज पनि दिनभरिजसो मजदुरहरू वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा जुलुस प्रदर्शन गरिर
परीक्षा कडा गरेको झोंकमा प्रहरीमाथि ढुङगा–मुढा
प्रस, जीतपुर, १५ चैत/ विद्यार्थीहरूलाई चिट चोर्न नदिएको र चोर्न नपाएको झोंकमा आज पर्सा जिल्लाको बेल्वा गाविस–७ स्थित सोलखपुरको श्री नेपाल राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएलसी परीक्षा केन्द्रमा ढुङगा–मुढा भएको छ। परीक्षाको समय सकिने बेला केन्द्र बाहिरबाट भएको ढुङगा–मुढाले परीक्षा केन्द्र तनावग्रस्त बनेको थियो। ढुङगा–मुढा विद्यार्थी र उनका अभिभावकहरूले गरेको सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प सोलखपुर बेल्वाका सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक ईश्वर श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठका अनुसार उक्त घटनामा सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प सोलखपुर बेल्वाका पाँचजना जवानलाई सामान्य चोटपटक लागेको छ। मङगलवार विज्ञानको परीक्षा भइरहेको बेला जिल्ला शिक्षा अधिकारीले परीक्षार्थीहरूलाई मोबाइलको प्रयोग गर्न नदिएको र परीक्षा कडा गरेको भन्दै बाहिरबाट सुरक्षाकर्मीहरूलाई लक्षित गरी ढुङगा–मुढा गरिएको श्रेष्ठले बताएका छन्। ढुङगा–मुढा गर्ने अभिभावकहरूलाई प्रहरीले लखेटेपछि अवस्था सामान्य भएको थियो।
नक्कली बिमारीको अनुसन्धान कसले गर्ने ?
महेश्वर अधिकारी, डुमरवाना, १५ चैत/ नपढी एसएलसी पास गर्न परीक्षामा परीक्षार्थीले अनियमितता गर्न नयाँ बहाना सुरु गरेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म चिट चोर्ने, प्रश्नपत्र आउट गर्ने र नक्कली प्रशिक्षार्थी राख्ने चलन रहेपनि त्यसलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेपछि चोरीका लागि नयाँ शैली अपनाउन थालिएको हो। परीक्षार्थीले हात भाँचिएको बहाना बनाएर हातमा प्लास्टर गर्ने र योग्य सहयोगी राखेर परीक्षा दिएर प्रहरी र प्रशासनको आँखामा धूलो हालिरहेको स्रोतको दाबी छ। परीक्षा नजिकिंदै जाँदा आफू अध्ययनरत विद्यालयबाट सिफारिस गराएर योग्य सहयोगी राख्ने चलन छ। हात भाँचिएको भनेर प्लास्टर गरेर आउने र परीक्षा सकिने बित्तिकै हातको प्लास्टर निकालेर परीक्षा केन्द्रबाट बाहिरिने गरेको अघिल्लो वर्ष एसएलसी परीक्षामा सहभागी एक छात्रले सुनाए। उनले भने पटक–पटक परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि सशस्त्र प्रहरीका एक परीक्षार्थीले हात भाँचिएको नाटक गरेर परीक्षामा सहयोगी राखेका थिए। अन्य व्यक्तिले सहयोगी राखेमा अनेक सोधपुछ गरिने भएपनि हात भाँचिएको व्यक्तिले सहयोगी राख्दा कुनै सोधपुछ नहुने परीक्षा निरीक्षकहरू बताउँछन्। ह
एजेन्सी, १६ चैत/ आईसीसी विश्वकप क्रिकेट २०११ अन्तर्गत आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा श्रीलङकाले न्यूजील्यान्डलाई ५ विकेटले पराजित गरी लगातार दोस्रोपटक फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टस जिती पहिले ब्याटिङ गरेको न्यूजील्यान्डले लसिथ मलिङगा (३/५५) र अजन्था मेन्डिस (३/३५) को कसिलो बलिङको सामु ४८.५ ओभरमा २१७ रन मात्र बनाउन सक्यो। जसमा स्काट स्टायरिसले सर्वाधिक ५७, मार्टिन गुप्टिलले ३९ र रोस टेलरले ३६ रन मात्र बनाउन सके। न्यूजील्यान्डले ४ विकेटको क्षतिमा १९२ रन बनाए पनि पछिल्लो ६ विकेट मात्र २५ रन बनाएर आउट भयो। न्यूजील्यान्ड यस विश्वकपसमेत छैठौंपटक सेमिफाइनलमा पुगेर पराजित भएको छ। २१८ रनको विजयी लक्ष्य पाएको श्रीलङकाले उपुल थरङगा र तिलकरत्ने दिलशानको साझेदारीमा गतिलो सुरुवात गरेको थियो। ३० रन बनाइ थरङगा आउट भएपछि दिलशान (७३) र क्याप्टेन कुमार सङगाकारा (५४) ले १२० रनको साझेदारी गरेका थिए। दिलशान आउट भएपछि २५ रनमा श्रीलङकाको ४ विकेट झरेपछि श्रीलङका अप्ठ्यारो स्थितिमा आएको थियो। तर थिलन समरवीरा (२३) र एञ्जेलो मैथ्युज (१४) ले पारी सम्हाल्दै ३५ रनको अविजित साझेदारी गरी श्रीलङकालाई ४७.५ ओभरमैं विजयी बना
फेरि दु:खदायी स्थिति
देशमा व्याप्त सङ्क्रमण, असुरक्षा, लोडसेडिङआदि समस्या झेल्दै आइरहेको औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पुन: अव्यवस्थाको अवस्था सिर्जना भएको छ। उद्योगहरूमा कार्यरत मजदुरहरूले तलब–भत्ता तथा अन्यान्य मागहरू तेस्र्याएर काम बन्द घोषणा गरेका छन्। दुई दिनदेखि यस क्षेत्रका समस्त उद्योगहरूमा हडताल जारी छ। काम गर्न चाहने मजदुरहरूलाई जबर्जस्ती रोकेर उद्योगहरूमा तोडफोड गर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। यस क्रममा पहिलो दिन पोलिप्लास्ट उद्योग र दोस्रो दिन हेमन्त इन्डस्ट्रिज र शिवशक्ति उद्योगमा हडताली मजदुरहरूले काममा जान लागेका मजदुरहरूलाई रोक्दै उद्योगमा तोडफोड मचाएका छन्। एकातिर मजदुरहरू आफ्नो मागको पूर्णताका लागि हडतालमा उत्रेका छन् भने अर्कोतिर उद्योगहरूको छाता सङगठन वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले अनधिकृत बन्दमा सामेल मजदुरहरू चैत १५ पनि काममा नफर्के ‘नो वर्क नो पे’ सिद्धान्त लागू गर्दै उद्योगहरूमा तालाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको छ। मजदुरहरूको मागका सम्बन्धमा यस अगावै मजदुरका तीन आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच बढोत्तरी हुने तलबभत्ताबारे सम्झौता भई उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति भ
नेपाली राजनीतिको वर्तमान
विनोद गुप्ता माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको एमाले गठबन्धन सरकारले राजीनामा गरेको लामो समयसम्म अर्को सरकार गठन हुन सकेन। जसोतसो गठन भए पनि एक महिनासम्म प्रधानमन्त्री एक्लैले कैबिनेट हाँक्नुभयो भने अहिले केही मन्त्रीहरू समावेश भएका छन् तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यो कसरत हुनुपूर्व पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको भए हामी नेपालीले यसमा पनि सम्भवत: कीर्तिमान कायम गर्ने थियौं। किन हुन्छन् नेपाली राजनीतिलाई उपहासको पात्र बनाउने यस्ता घटनाहरू ? समस्या भन्नु नै लक्ष्यमा पुग्न नसक्नु हो। यस दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा सबै राजनैतिक दलहरूले देशको एकमात्र समस्या संविधान लेखन हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको भए माधव नेपालको सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउनुको कुनै औचित्य देखिंदैन। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रा दलहरूमा संविधान लेखनभन्दा सत्ता प्राप्तिले बढी महत्त्व राखेको छ। हाम्रो संविधानसभाको बनोटमा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो निर्वाचित दल भएकोले यसले नेका र नेकपा एमालेमध्ये कुनै एउटासँग गठबन्धन गरेर बहुमतको सरकार बनाउन सक्छ। तर बहुमतको सरकार आजको आवश्यता होइन। सहमतिको सरकार आज
६५ विद्यार्थी र ५ निरीक्षक कारबाईमा
आरके पटेल, १३ चैत/ प्रवेशिका परीक्षाअन्तर्गत आज तेस्रो दिन पर्सा जिल्लामा ६५ जना विद्यार्थी र ५ जना निरीक्षक कारबाईमा परेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्रप्रसाद झाको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले भिस्वा र पोखरियाबाट ५० जनालाई निष्कासित गरेको छ। प्रवेशपत्र फोटोकपी गरी परीक्षा दिइरहेका परीक्षार्थी र परीक्षार्थीका अभिभावकलाई सक्कली प्रवेशपत्र ल्याउनको लागि दुई घण्टाको समय दिएकोमा अभिभावकहरूले प्रवेशपत्र ल्याउन नसकेपछि पोखरियाबाट ३१ जना र भिस्वाबाट १९ जना गरी ५० जनालाई निष्कासन गरेका थिए। यसैगरी जिशिअ केदार तिवारीको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले विजयबस्तीबाट १२ जना, सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको टोलीले माइस्थान विद्यापीठबाट दुईजना र जिएचपीबाट एकजनालाई निष्कासन गरेको छ। आज पापरीक्षापूर्व विद्यार्थीहरूले स्वस्थ जीवन शैली अपनाउनुपर्छ अर्थात् कम्तीमा सात घण्टा सुत्नुपर्छ, सन्तुलित आहार खानुपर्छ र कम्तीमा पन्ध्र मिनेट नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ। परीक्षापूर्व समय–समयमा आत्मपरीक्षण गर्नुपर्छ। आफ्नो परिवारजन वा साथीहरूसँग पनि केही समय व्यतीत गर्नुपर्छ जसले उनीहरूमा उत्साह
हात हतियार तथा सार्वजनिक मुद्दाका १२ जना दण्डित
प्रस, पर्सा, १३ चैत/ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झाको इजलासले हातहतियार मुद्दामा एकजनालाई ५ वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना गरेको छ। मकवानपुर चित्लाङ निवासी राजेश बलामीलाई सो दण्ड सजाय सुनाइएको हो। ०६७/३/२ गते काठमाडौंबाट टैक्सी चढी वीरगंज हतियार बेच्न आएका बलामीलाई पुन: काठमाडौं फर्कने क्रममा गण्डक चोकमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनको साथबाट एक थान पेस्तौल र ५ वटा गोली बरामद भएको थियो। त्यसैगरी खरखजाना मुद्दामा सोनी यादवलाई एक वर्ष कैद र रु. २० हजार जरिवाना भएको छ। प्रहरीले यादवको खल्तीबाट २ वटा गोली बरामद गरेको थियो। त्यस्तै सार्वजनिक अपराध मुद्दामा १० जनालाई जिल्ला प्रशासनले दण्डित गरेको छ। मुद्दा फाँटका ललित झाका अनुसार वीरगंज–१९ नगवा निवासी शत्रुघ्नप्रसाद यादवलाई रु. ४ हजार, वीउमनपा–१५ का सुदर्शन महतोलाई रु. २५ हजार बिगो र रु. ७ हजार, वीरगंज–१४ निवासी मनोज नेपालीलाई रु. १० हजार जरिवाना गरिएको छ। त्यसैगरी वीउमनपा–१६ का भोला अन्सारी, औरंगजेब अन्सारी, शेख रुस्तम, नसीम अख्तर र नाजिर मियाँलाई जनही रु. १० हजार दण्ड गरिएको झाले बताए। त्यसैगरी सार्वजनिक अपराध मुद्
मिशन प्रवेशिका परीक्षा – २
अनन्तकुमार लाल दास प्रवेशिका परीक्षा प्रारम्भ भइसकेको छ। रमेशले प्रवेशिकाको तयारी राम्ररी गरेको छ। परीक्षामा राम्रो गर्नेे आत्मविश्वास पनि उसमा छ। तर प्रवेशिका परीक्षा सुरु हुनासाथ उसको भोक र निद्रा दुवै गायब भएको छ। हरेक दिन परीक्षा दिन जाँदा ऊ अत्तालिएको हुन्छ। उसको मनमा अनेकौं प्रकारका प्रश्नहरू उठ्न थाल्छ, “के म सबै प्रश्नहरूको उत्तर लेख्न भ्याउँछु, के मैले सबै प्रश्नहरूको जवाफ राम्ररी याद गरेको छु ? परीक्षा भवनमा कहीं मेरा साथीहरूले त मलाई डिस्टर्ब गर्दैनन् ?” कहिलेकाहीं उसलाई महसुस हुन्छ कि उसले आजसम्म जे याद गरेको छ सबै बिर्संदै गइरहेको छ। रमेश एक्लो होइन, यस्ता लाखौं विद्यार्थी छन् जो परीक्षाको चिन्ता वा तनाव अर्थात् ‘एग्जाम एङ्जाइटी’ ले पीडित देखिन्छन्। यस तनावले विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाको बेला अनेक किसिमले परेशान उत्पन्न गर्न सक्छ। केही हद सम्म यस तनावले विद्यार्थीहरूलाई पढाईप्रति एकाग्र हुन पनि प्रेरित गर्छ तर यसको नकारात्मक रूपले विद्यार्थीहरूको परीक्षालाई पूर्ण रूपले प्रभावित पनि पार्दछ। परिणाम स्वरूप राम्रो विद्यार्थीहरू पनि परीक्षामा फेल हुन सक्छन वा कम अङकले उ
लैङिगक विभेदको अन्त्य जरुरी
नेपाली समाजमा लैङिगक विभेद विद्यमान मात्र छैन, प्रभावकारी ढङगले क्रियाशील पनि छ। लैङिगक विभेदको सामान्य अर्थ स्त्री–पुरुषबीच भेदभाव हो। यो भेदभाव कतिसम्म क्रियाशील छ भने महिला र पुरुषले एउटै काम गर्दा पुरुषलाई बढी पारिश्रमिक र महिलालाई थोरै दिइन्छ। धेरै दिन भएको छैन, नेपालमा महिलालाई शिक्षा आवश्यक ठानिंदैनथ्यो। शिक्षा प्राप्त नभएपछि पुरुषको बराबरी गर्ने कुरा पनि आएन। शिक्षित नभएपछि आफूमाथि हुने विभेद र अन्यायका कुरालाई नियति मानेर सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था थियो। नारी सम्पूर्णरूपले पुरुषका लागि तर पुरुषका लागि नारी एउटा वस्तु सरह ठानिने मनोवृत्ति थियो। आज यस्ता थुप्रै कुराहरूमा सुधार त भएको छ तर युग अनुसार महिलालाई समान अधिकार दिएर उनीहरूको व्यक्तित्वको समग्र विकास हुने वातावरण दिन समाज जानेर वा नजानेर तयार छैन। कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै तरिकाले महिलालाई थिचोमिचो गर्ने उपाय अवलम्बन गरि नै रहेको छ। झन् तराई वा पहाडको ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा छैन, रोजगारको उचित व्यवस्था छैन, सिकेर नभए देखेर अगाडि बढ्ने परिस्थितिको अभाव छ, जानीजानी थिचोमिचो गर्ने परिपाटी छ र महिलाले गुम्सिएर ब
धर्मशालामा सशस्त्रको बेस क्याम्प
गोकुल घोरसाइने, निजगढ, १२ चैत/ भवन अभावमा बाराको निजगढ गाविस–७ स्थित शिवमन्दिरको धर्मशालामा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प स्थापना गरिएको छ। यसअघि प्रयोग गर्दै आएको कृषि सेवा केन्द्रको भवन जीर्ण बनेको र बेस क्याम्पको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोले प्रहरीले मन्दिरको धर्मशाला प्रयोग गर्नुपरेको बताइएको छ। मन्दिरको भुइँतल्लामा शिवको मूर्ति र माथिल्लो तल्ला धर्मशालाको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। भवन अभावले स्थानीय बासिन्दाहरूसँगको सहमतिमा केही दिनका लागि मात्र धर्मशालाको प्रयोग गरिएको बेस क्याम्पका प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकबहादुर पन्थले बताए। स्थानीयसँगको छलफलबाट प्रहरीको भवन निर्माण नहुन्जेलसम्मका लागि धर्मशाला प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको मन्दिर सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष सावित्री भारतीले जानकारी दिइन्। सशस्त्रले धर्मशालानजिकै गाविस–७ मा स्थानीयले उपलब्ध गराएको १ बिघा क्षेत्रफल जमिनमा नयाँ पक्की भवन निर्माण सुरु गरेको छ। भवन अभावमा सुरक्षा गस्ती प्रभावित बनेपछि स्थानीयले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिएको एक करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने सो जमिन प्रहरीलाई निश्शुल्क उपलब्ध गराएका हुन
द्वन्द्वको पीडा समाप्त पार्न चौतर्फी प्रयासको खाँचो: प्रजिअ झा
प्रस, वीरगंज, १२ चैत/ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झाले द्वन्द्वको पीडालाई समाप्त पार्न चौतर्फी प्रयासको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। जिल्ला बालकल्याण समिति र हिमराइट्स पिपिसिसिको संयोजनमा सम्पन्न बालबालिकाका सवालमा जिल्लास्तरीय समन्वय बैठकको अध्यक्षता गर्दैै प्रजिअ झाले आज सो कुरा बताएका हुन्। प्रजिअ झाले राज्यका निकाय एवं क्रियाशील रहेका सङ्घसंस्थाको काममा समन्वय भएमा मात्र द्वन्द्वपीडित बालबालिकाहरूको समस्या समाधान गर्न थप सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा पर्सा जिल्लामा बालबालिकाका लागि कार्यरत २२ वटा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । बालबालिकाका सवालमा समन्वय गरी काम गर्न एक संयन्त्रको निर्माण, संस्थाले गर्ने कामको विवरण सङकलन गरी आवश्यक मुद्दा उपयुक्त संस्थालाई जिम्मा दिन सिफारिस प्रणालीको विकास गर्नेलगायतका निर्णयहरू बैठकले गरेको छ । बैठकमा हिमराइट्सका पर्सा संयोजक रितेश त्रिपाठीले यहाँ विभिन्न निकाय र संस्थाले काम गरी बजेट र जनशक्ति खर्च भएको भए तापनि उल्लेखनीय कार्य हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै एक समन्वयात्मक संयन्त
मानिसका दु:खका कारणहरू
-राजेन्द्रप्रसाद कोइराला आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो। जसैजसै मानिसका आवश्यकताहरू बढ्दै गए, आविष्कारहरू हुँदै गए। मानव इतिहासको ५००० वर्ष पुरानो समयलाई अहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने हामीले ज्यादै ठूलो फड्को मारेका छौं। विज्ञानको आगमन र सञ्चारमाध्यमको विस्मयकारी विकासले सारा संसारलाई एउटा सानो गाउँमा परिणत गरेको छ। ५००० वर्षअगाडि मानिसले जुन किसिमले जीवन बिताउने गर्दथे, त्यसको इतिहास पढ्दा दन्त्यकथा जस्तो लाग्छ। भाषा थिएन, सभ्यता थिएन, व्यवहार थिएन, जङगल– जङगल घुमेर मानिसहरू जीवन बिताउने गर्दथे। जसैजसै समय बित्दै गयो, उनीहरूमा चेतनाको विकास हुन थाल्यो। आवश्यकताको अनुभूति हुन थाल्यो। अन्ततोगत्वा आवश्यकता अनुसार आविष्कार हुँदै गयो र मानवीय सभ्यताको विकासको शृङ्खला सुरु हुन थाल्यो। ब्रिटेनमा औद्योगिक क्रान्तिको सूत्रपातपछि सारा संसार आधुनिकतातिर लम्क्यो। त्यसपछि मानिसले आफ्ना आवश्यकतालाई असीमित इच्छामा परिणत गर्ने तीव्र अभिलाषालाई प्राथमिकता दिन थाल्यो। यसरी भौतिकवादी संसारको उत्थान भयो। आध्यात्मिक मूल्य र मान्यताहरूलाई थाती राखी भौतिकवादी प्रगति र विकासलाई मान्यता दिन थ
आफ्नो भविष्य र चरित्र स्वयं निर्माण गरौं
मानिस आफ्नो भाग्यको निर्माता हो। आफ्नो उत्थान–पतन उसको वशको कुरा हो। यो तथ्य जति साँचो छ त्यति नै साँचो के पनि हो भने वातावरणको प्रभाव मानिसमाथि पनि पर्दछ र उसको व्यक्तित्वबाट परिवार एवं समाजको वातावरण पनि प्रभावित हुन्छ। नराम्रो वातावरणमा रहेर कदाचित कसैले आफ्नो विशिष्टता साँच्न सक्छ, साथै यो सत्य हो कि वातावरणको प्रभाव पनि नपरी रहन सक्दैन। धेरै मानिसको–समर्थ मानिसको क्रियाकलापले नै वातावरणको निर्माण हुन्छ। बहुसङ्ख्यक भएर एकैनासको गतिविधिहरू अँगाल्दा दुर्बल स्थितिका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो एउटा विशेष प्रकारको अवस्था सिर्जना गर्दछन्। व्यसनी, अनाचारीहरूको समुदायले पनि यस्तो प्रभाव उत्पन्न गर्दछ जसबाट सामान्यस्तरका मानिसहरू प्रभावित हुन्छन्। यसकारण राम्रो वातावरणमा रहनु र नराम्रो वातावरणबाट जोगिनु त्यति नै आवश्यक छ, जति स्वच्छ हावामा रहने र फोहर–दुर्गन्धबाट जोगिने प्रयास गरिन्छ। त्यो प्रसिद्ध कथा जसमा एउटा गुँडबाट झिकिएका सुगाका दुई चल्लालाई दुई भिन्न ठाउँमा पालिएको थियो। त्यहाँको परिवेशअनुसार तिनीहरू पालिए। सन्तकहाँ पालिएको सुगाले ‘सीताराम–राधेश्याम’ भन्न सिक्यो भने चोरको घरम
धमाकेदार जीतले श्रीलङका सेमिफाइनलमा
एजेन्सी, कोलम्बो, १२ चैत/ श्रीलङकाको राजधानी कोलम्बोस्थित आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियममा क्रिकेट विश्वकप २०११ को अन्तिम क्वार्टरफाइनलमा श्रीलङकाले तिलकरत्ने दिलशानको अविजित १०८ र उपुल थरङगाको अविजित १०२ रनको शतकीय पारीको मदतले इङ्ल्यान्डलाई १० विकेटले पराजित गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको इङ्ल्यान्डले ५० ओभरमा ६ विकेटको नोक्सानीमा २२९ रन बनाएको थियो। जसमा सर्वाधिक जोनाथन ट्राटले ८६ रन बनाएका थिए। २३० रनको विजयी लक्ष्य लिएको श्रीलङकाले ३९.३ ओभरमा बिनाविकेट नोक्सानी २३१ रन बनाएर पूरा गर्‍यो। क्रिकेट विश्वकपको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक अन्तरले श्रीलङकाले इङ्ल्यान्डलाई पराजित गरेको छ। योभन्दा पहिले सन् १९९२ को क्रिकेट विश्वकपमा वेस्ट इन्डिजले पाकिस्तानलाई पराजित गरेको थियो। इङ्ल्यान्ड एक दिवसीय क्रिकेटमा १० औं पटक १० विकेटको अन्तरले पराजित भएकोमा श्रीलङकासँग ३ पटक पराजित भएको छ। यस क्रिकेट विश्वकपको पहिलो सेमिफाइनल २९ मार्च मङगलवार श्रीलङका र न्यूजील्यान्डबीच श्रीलङकाको कोलम्बोमा हुनेछ भने दोस्रो सेमिफाइनल ३० मार्च बुधवार भारतको मोहालीमा दुई पारम्परिक प्रतिद्वन्द्वी भारत
मध्यमाञ्चलमा गत वर्षको तुलनामा मानव अधिकार हनन घटनामा कमी
प्रस, पर्सा, ९ चैत/ अनौपचारिक सेवा केन्द्र ( इन्सेक) ले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०११ प्रकाशन गर्दै मानव अधिकारको अवस्था आशाजनक र उत्साहवद्र्धक नभएको जनाएको छ। क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ७६२ वटा घटनामा ४०६ जना महिलासहित ११२४ जना पीडित भएको उल्लेख छ। राज्यपक्षबाट मानव अधिकार हननका ६६ वटा घटनामा २१६ जना पुरुष पीडित भएका र माओवादीबाट ५६ वटा घटनामा ८ जना महिलासहित १०६ जना र गैरराज्य पक्षबाट ६३० वटा मानव अधिकार हननका घटनामा ३८४ महिलासहित ८०३ पुरुष पीडित भएको उल्लेख छ। सन् २०१० को यो तथ्याङक सन् २००९ भन्दा केही सन्तोषजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मध्यमाञ्चलका तराईका ६ जिल्लाहरूमा भूमिगत सङगठनका नामबाट २७ जनाको हत्या भएको र कथित बोक्सीको आरोपमा पर्सा, बारा, रौतहट, मकवानपुर, धादिङ, सर्लाही, सिन्धुली, महोत्तरी, दोलखा र धनुषामा गरी १४ जना महिला पीडित हुनुपरेको पनि जनाइएको छ। सन् २०१० मा घरेलु हिंसाबाट २८ महिलाको हत्या भएकोमा अधिकांश तराईमा दाइजो सम्बन्धी घटना रह
प्रवेशिकामा पचास हजार विद्यार्थी
प्रस, लङगडी, ९ चैत/ विद्यार्थीहरूका लागि फलामे ढोकाको रूपमा मानिने एसएलसी परीक्षा आजदेखि देशभर सुरु भयो। जिल्लामा यसपालि ५५,४५५ जना विद्यार्थी परीक्षा दिइरहेका छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साले ग्रामीण विद्यार्थीहरूका लागि ७ वटा तथा सदरमुकाममा ११ वटा गरी जम्मा १८ वटा परीक्षा केन्द्र तोकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी केदार तिवारीले बताएका छन्। नियमिततर्फ छात्रा १०९१८ जना, छात्र ३०५३८ जना, एक्जाम्पटेडतर्फ छात्रा १६१ जना र छात्र २७१ जना छन्। २५ विद्यार्थीमा एकजना परीक्षा गार्डको व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा १०/१० जवान नेपाल प्रहरी एवं सशस्त्र प्रहरी खटाइएका छन्। तीन वटा प्रहरी मोबाइल टोली परिचालन गरिएको छ। प्रस, हेटौंडा/ बिहीवारबाट सुरू हुने एसएलसी परीक्षाको लागि मकवानपुरमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताइएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मकवानपुरले एसएलसीको तयारी पूरा भएको जनाएको हो। बुधवार बसेको एसएलसी परीक्षा समन्वय समिति मकवानपुरको बैठकले परीक्षालाई मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्न सवैसँग अपिल गरेको छ। मकवानपुरबाट यस वर्ष नियमिततर्फ चार हजार छ सय ९६
विश्वकप क्रिकेट ‘गर कि मर’
भारतीय उपमहाद्वीपमा जारी आइसिसी विश्वकपको लिग चरणका सम्पूर्ण खेलहरू विधिवत सम्पन्न भइसकेको छ र अब सुपर ८ अर्थात् क्वाटरफाइनलका खेलहरूको रोमाञ्च चरम हुनेछ। यसमा कुनै पनि राष्ट्रले दोस्रो मौका नपाउने हुँदा अबका खेलहरूमा गर या मरको स्थिति रहने छ। यसै क्रममा भारतको अहमदाबाद स्थित मोटेरा रङगशालामा आयोजक राष्ट्र भारत र चारपटक विश्वकप उचालिसकेको अस्ट्रेलियाबीच खेलमा सबै खेल प्रेमीहरूको आँखा रहने छ। भारतमा क्रिकेटलाई धर्मको रूपमा लिइन्छ। त्यसमा पनि विश्वकपमा आफ्नो टोली फाइनलमा पुगी आफ्नै घरमा विश्वकप उचाल्ने सौभाग्य प्राप्त गरोस् भन्ने चाहना सम्पूर्ण भारतीयको मनमा रहेको छ। तर भारतले लिग चरणमा देखाएको उतारचढावपूर्ण खेल कौशलको कारण कतिपय भारतीय क्रिकेट प्रेमीहरूको मन आजको खेलले गर्दा अलि हच्किएको हुन सक्छ। यद्यपि भारतसँग क्रिकेटको भगवान मानिने सचिन तेन्दुलकर र कुनै पनि खेललाई आफ्नो धुवाँधार ब्याटिङले मोड्न सक्ने क्षमतावान खेलाडी वीरेन्द्र सहवागको साथले गर्दा भारतीय टोली अपेक्षाकृत यस विश्वकपमा बलियो मानिएको छ। मध्य क्रममा विराट कोहली, युसुफ पठान, युवराज सिंह र क्याप्टेन महेन्द्र सिंह धोनिको
नेपाली जनताको अवस्था अहिले एउटा पुरानो लोककथाजस्तो भएको छ। त्यस जमानामा एकजना व्यक्ति सार्‍है दरिद्र थिए। जति गरे पनि दरिद्रता हटेन। अनि एक दिन भगवान् शिवलाई रिझाउन भनी तपस्या गर्ने उद्देश्यले जङगलतिर लागे। लामो, कष्टप्रद तपस्या गरेपछि शिवजी प्रसन्न भएर दर्शन दिंदै सोधे–तिमीलाई के चाहिन्छ ? दरिद्र व्यक्तिले भन्यो मेरो दरिद्रता हटाइदिनुस्। शिवजीले उसलाई एउटा शङ्ख दिएर भने– तिमीलाई जे चाहिन्छ यससँग माग्नु, यसले दिन्छ। व्यक्ति खुशी हुँदै घर फक्र्यो। राति एकजना व्यक्तिकहाँ बास बस्न पुग्यो। खान–ओढ्न केही चाहिंदैन, बास पाए पुग्छ भन्यो। घरधनी बाठो थियो, पक्कै यो मालदार आसामी हुनुपर्छ भन्ने ठान्यो र चियो थाप्यो। दरिद्र व्यक्तिले शङ्खसँग सुत्नका लागि राजसी पलङग–ओछयान तथा खानका लागि छत्तीस व्यञ्जनको फरमाइस गर्‍यो। राति दरिद्र व्यक्ति सुतेको बेला बाठो घरधनीले आफ्नो सामान्य शङ्खसँग त्यस व्यक्तिको शङ्ख साटिदियो। बिहान भएपछि दरिद्र व्यक्ति घर लाग्यो। घर पुगेर शङ्खसँग माग्दा केही पनि प्राप्त भएन। उसलाई शिवजीले ठगे भन्ने लाग्यो र पुन: तपस्या गर्न हिंडयो। यसपटक शिवजीले उसलाई ढपोरशङ्ख दिए। दरिद्र व्
नारायणी सिंचाई प्रणालीमा भ्रष्टाचार,कामै नगरी बजेट स्वाहा
प्रस, पर्सा, ३ चैत्र/ नारायणी सिंचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था ब्लक नं. ३ पोखरियाका पदाधिकारीहरूले एक करोडभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको पर्दाफास भएको भएको छ। प्राय: नेपाली काङग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता रहेको समितिको भ्रष्टाचार पार्टीभित्र जारी गुटबाजी तथा अन्तरद्वन्द्वका कारण भ्रष्टाचारको धटना सार्वजनिक हुन थालेको हो। नहर सुधार तथा नियमित सिंचाइ प्रणाली अन्तर्गत बि.एस.सी.को निर्माण कार्य, नहर तट सुदृढीकरण तथा सर्भिस रोडमा ग्रेभल मरम्मत तथा निर्माण तथा सम्पूर्ण संरचना मरम्मत कार्यको नाममा नक्कली बिल भरपाई बनाई भ्रष्टाचार भएको उजुरी स्थानीय प्रशासनमा परेको छ। ०६३ सालदेखि काङग्रेसका बाबुलाल मेहताको अध्यक्षतामा गठित समितिले निर्माण तथा मरम्मत कार्य नगरी सक्कली बिल भरपाई तथा अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यको नक्कली सहीछाप गरी सिंचाइको मिलोमतोमा रकम रकम भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको हो। काङ्ग्रेस पर्साका सभापति सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झासमक्ष सोबारे उजुरी गरेको टोलीमा सहभागी पुनर्गठित नेकपा माओवादीका छोटेलाल यादवले जनाए।
फिरौती बुझ्ने अपहरणकारी प्रहरीको गोलीबाट घाइते
प्रस, पर्सा, ३ चैत्र/ पर्सा प्रहरीको गोलीबाट अपहरणमा संलग्न एकजना घाइते भएको छ। भारत मुज्जफरपुर निवासी धनञ्जय यादवको अपहरण घटनामा आज फिरौतीबापत रकम दिन अपहरित व्यक्तिको तर्फबाट पर्सा जिल्ला सेढवा– ६ (जिराभवानी नजिक) पुगेको सादा पोशाकको प्रहरीले फिरौतीबापत रकम बुझ्न आएको भारत बेतिया निवासी प्रमोद साहमाथि गोली प्रहार गरेको थियो। उसको छातीमा गोली लागेको छ। अर्का एकजना नाम नखुलेको व्यक्ति प्रहरीलाई गोली प्रहार गरी फरार हुन सफल भएको छ। गोलीबाट प्रहरी टोलीको एकजना घाइते भएको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रमान श्रेष्ठले बताएका छन्। यसैगरी भगौडा अपराधीको गोलीबाट सेढवा–६ बस्ने अगिनदेव गौरो घाइते भएका छन्। घटनास्थलदेखि १०० मिटर पर सानो मन्दिरमा बसेका गौरोको घुँडामा गोली लागेको छ। विश्वस्त सूत्र अनुसार पर्सा जिल्ला हरैया गाविसका लालदेव मुखियाले फिरौती बुझ्ने भारतीय अपराधीलाई आफ्नो मोटरसाइकलमा सेढवा–६ सम्म पुर्‍याएका थिए। घटनास्थल वरै जिराभवानी मन्दिर छेउमा लालदेव मुखिया लुकी बसेका र दुईजना भारतीय फिरौती रकम बुझाउने निर्धारित ठाउँमा पुगेका थिए। प्रहरीले परिवारको सदस्य भएको नाटकगरी डेढ
गरिबी र अर्थ व्यवस्था २० अनलाईन खरिद
विश्वराज अधिकारी जसरी कुनै एक फर्मुला प्रयोग गरेर कुनै एक जटिल हिसाब बनाउन सकिन्छ त्यसैगरी कुनै एक खास किसिमको कार्य गरेर वा योजना लागू गरेर मुलुकको गरिबी निवारण गर्न सकिंदैन। गरिबी निवारणका लागि एकै पटक थुप्रै किसिमका कार्यहरू गर्नुपर्दछ। गरिबी निवारणका लागि गरिने थुप्रै तरिकाहरूमध्ये एक हो विपन्न जनताले प्रयोग गर्ने सामानहरूको मूल्य कम पार्नु। वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा इन्टरनेटको प्रयोग गरेर आम जनताले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य कम पार्न सकिन्छ। आम जनताले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य कम पार्नमा इन्टरनेटले पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। इन्टरनेटको प्रयोगद्वारा खरिद लागत, बिक्री लागत, भण्डार लागत तथा अन्य किसिमका लागतहरू कम पार्न सकिन्छ। अमेरिका, क्यानाडा लगायत थुप्रै धनी अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा खरिद–बिक्रीका लागि व्यापक मात्रामा इन्टरनेट प्रयोग भएको पाइन्छ। अमेरिकामा सानातिना घरायसी सामानदेखि कम्प्युटर, इलेक््ट्रोनिक सामान, लुगाफाटो, खेलौना, पुस्तक आदि खरिद–बिक्री गर्न इन्टरनेटको ठूलो मात्रामा प्रयोग भएको पाइन्छ। खास गरी पुस्तकको खरिद–
नेपाली शेयर बजारको उतार चढाव
उमाशङकर केशरी नेपालमा ०४६ सालको जनान्दोलनपश्चात् अपनाइएको उदार अर्थनीतिको परिणामस्वरूप पूँजीबजारको विकास भएको पाइन्छ। सोपूर्व नेपालमा शेयर कारोबारको लागि दोस्रो बजार थिएन। पूँजी बजारको विकास भएको दुई दशक भइसक्दासमेत सम्बन्धित निकायले यस क्षेत्रबारे सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी दिन नसकेकोले लहैलहैमा शेयर कारोबार गर्नाले शेयर बजारमा अस्वाभाविक उतार–चढाव हुने गरेको देखिन्छ। नेपालमा अधिकांश लगानीकर्ताले कुन कम्पनीले कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने उक्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था अध्ययन नै नगरी अरूको लहलहैमा शेयरमा लगानी गरिरहेका छन्। प्राथमिक शेयर निष्कासनको क्रममा अन्य व्यक्तिको नागरिकता र बैंक खाता प्रयोग गरेर शेयर आवेदन दिने प्रवृत्ति अझै पनि नियन्त्रित हुन सकेको छैन। स्टक एक्सचेन्जमा शेयर लिस्टिङ हुनुअघि नै अनुमानको भरमा ठूलो मात्रामा शेयर कारोबार हुने गरेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६३ चैत १३ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजी बढाएपश्चात् नेप्से सूचकाङक उकालो लाग्न सुरु गर्‍यो र पहिलो सातामैं ८८० बिन्दु छुन सफल भयो। २०६४ असोज महिनासम्म ८९९.४२ पुगी केही दिनसम
शीतलप्रसाद महतो राजनीतिक अस्थिरता र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताका अभावमा नेपाली अर्थतन्त्र यतिखेर बढ्दो बेरोजगारी, दाहोरो अङकको मूल्यवृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था, लगानीको असहज वातावरण, असमान विकास र उत्पादकत्वमा आएको र्‍हासजस्ता समस्याबाट ग्रस्त भएको छ। घरजग्गामा गरिएको अर्बौं लगानी गतिशील नहुँदा त्यसको प्रभाव शहरी अर्थतन्त्रमा व्यापक परेको छ। सूचना प्रविधिका सामग्री, सवारी साधन र निर्माण सामग्रीको बजार क्रमश: शिथिल हुँदै गएको छ। सुपर मार्केटको बजार पनि सुस्ताएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुने तर विकास निर्माणमा खर्च हुन नसक्दा बैकिंग क्षेत्रमा तरलताको अवस्था उस्तै देखिएको छ। पछिल्लो समयमा घरजग्गा र सेयर लगानीबाट कमाइ गरेको मध्यमवर्ग नगद अभावमा अहिले सबैभन्दा बढी अक्रान्त हुन पुगेको छ। बढ्दो दण्डहीनता र शान्ति सुरक्षाको बिग्रँदो अवस्थाले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेर अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन सङकटग्रस्त बन्दै गएको छ। आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी र बेरोजगारीमा अपेक्षित सुधारको सङकेत देखापरेको छैन। लगानी अनुकूल वातावरण बन्न नसक्दा राज्य र न
दल र नेतामा आर्थिक पारदर्शिता हुनु अपरिहार्य
वीरेन्द्रप्रसाद यादव राजनीति गर्नु त्यति सहज छैन जति अचेल बुझ्ने गरिएको छ। राजनीतिज्ञ भनेको निस्स्वार्थ भावले देश र जनताको निमित्त मरिमेट्ने व्यक्ति हो। देश र जनता निम्ति निजी स्वार्थको त्याग र बलिदान गर्दै सिद्धान्त र विचारको मार्गमा हिंने व्यmि हो। एउटा सच्चा राजनीतिज्ञले आफ्नो निजी स्वार्थको सयौंपटक बलिदान दिन सक्छ तर देश र जनताको हकमा नोक्सानी हुन दिंदैन। अचेल राजनीति सहज हुनुको कारण के हो भने त्याग र बलिदानको सट्टा शक्ति र प्रभावको ठेकेदारी गर्न पाइएको छ। देश र जनतालाई जेसुकै होस् व्यक्तिगत आर्थिक लाभ र शक्तिको दुरुपयोग गर्न पाइँदो रहेछ। राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नै शक्ति र प्रभाव बढाउनु र अर्थोपार्जन गर्नु रहेको छ। बिहान–बेलुकाको छाक टार्न मुश्किल भएको ६५ प्रतिशत जनता रहेको मुलुकमा गरीबीको दर बढ्दै जानु र नेता र दलहरूको आर्थिक हैसियत द्रुत गतिमा बढ्नु प्रमाणको रूपमा छ। संसद्मा दुईतिहाई कम्युनिस्ट सङ्ख्याले मुलुक अति गरीबीको सूचीमा रहेको पुष्टि हुन्छ तर ती वाम पार्टीका नेताहरूको अलिशान महल, चिल्ला गाडी र दलको आर्थिक हैसियतले दलगत र निजी स्वार्थले बढी प्